Ọtụtụ Ndị Mmadụ Kpopụrụ Site n'ọkụ Ọkụ Sardinia dị ka Rome na-arịọ maka Enyemaka EU
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ọtụtụ Ndị Mmadụ Kpopụrụ Site n'ọkụ Ọkụ Sardinia dị ka Rome na-arịọ maka Enyemaka EU
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọtụtụ narị si na Sardinia na-enwu gbaa ka Rome rịọrọ maka enyemaka EU
Na Mọnde, ọkụ na -ebilite na ngwụsị izu ka na -aga n'ihu ma ọ dịkarịa ala obodo 13 nke Sardinia, n'agbanyeghị mbọ nke opekata mpe ụgbọ elu 11 na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na -eme.
Ọkụ na -ebibi Sardinia nke Italy.
Ọtụtụ narị ndị bi ebe ahụ na ndị njem nleta esi na ọdachi na -abịanụ pụọ.
Gọọmentị Italiantali rịọrọ maka enyemaka EU iji lụso ọkụ ọhịa Sardinia ọgụ.
Ihe karịrị hekta 20,000 (oke ọhịa 50,000) nke oke ọhịa na ala emebiwo n'àgwàetiti Italy nke Sardinia ka nnukwu ọkụ na -agba na mpaghara Montiferru dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ agwaetiti ahụ. Ọrịa ahụ gbasakwara n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ruo n'ógbè Ogliastra.
Ọtụtụ narị mmadụ gbapụrụ n'ọkụ na -enwu ọkụ nke Sardinia ka Rome na -arịọ maka enyemaka EU
Gọvanọ mpaghara ahụ, Christian Solinas kpọrọ ya "ọdachi na -enweghị atụ" ka ọ na -ewebata ọnọdụ mberede na Sọnde.
Mgbidi ọkụ na -agagharị na mkpọda ugwu dị na Sardinia ma na -emechi ebe ụfọdụ, ebe anwụrụ ọkụ nke anwụrụ ọkụ na -ehichapụ elu -igwe. Ụgbọ elu na-agbanyụ ọkụ na-eji bọmbụ agba bọmbụ ahụ naanị otu mita site n'ụlọ.
A chụpụrụ ọtụtụ narị ndị bi na ndị njem na mpaghara agwaetiti ahụ ka ndị ọchịchị na -achọ ichebe ha pụọ ​​n'oké ọdachi na -abịanụ.
Ka ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na ndị na -aza ajụjụ mbụ na -alụ ọgụ iji merie oke ọkụ na -ebili ụbọchị nke atọ kwụ ọtọ, gọọmentị Italiantali na Rome na -arịọ European Union maka enyemaka maka ọdachi.
Enwetaghị ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ ruo ugbu a mana ọtụtụ narị atụrụ, ewu, ehi na ezi nwụrụ n'ọkụ ahụ ka ha tọrọ atọ n'ọba n'ọhịa dị n'okporo ụzọ ọkụ ọgbụgba. Na Mọnde, ọkụ na -enwu na ngwụsị izu ka na -aga n'ihu na opekata mpe obodo 13 nke Sardinia, n'agbanyeghị mbọ nke opekata mpe ụgbọ elu 11 na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na -eme.
Mgbalị ndị ọrụ mberede emeela ka ajọ ifufe na -ekpo ọkụ ka na -efe n'àgwàetiti ahụ. Na Sọnde, Ịtali rịọrọ mba Europe maka enyemaka iji kwụsị ọkụ ahụ ma kpọọ ha oku ka ha ziga ụgbọ elu pụrụ iche na -agbanyụ ọkụ. Na nzaghachi, EU kwenyere iziga ụgbọ elu Canadair anọ iji nyere Italy aka. France nyere abụọ n'ime ha na Gris nyere ụzọ abụọ.
Prime Minista Gris Kyriakos Mitsotakis kwuru na tweet na Mọnde ka ọ na -ekwupụta nkwagharị a, "n'oge ihe isi ike ndị a.